Covid 19 - - Page 2
Oct 26, 2021 Hope
ငါတော့ ဝလာပြီ … ပြဿနာပဲ !!!” ကိုဗစ်က တကယ်ပဲဝတဲ့လူတွေမှာပိုဆိုးလား? “ဆိုတဲ့ ပုစ္ဆာကို အောက်မှာ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်…ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းက လူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွေးရဲ့ ဇီဝိန်ကို တကယ်ပဲရင်နာစရာကောင်းအောင်ချွေခဲ့ပါပြီ။ ပိုပြီးရင်နာရတာက
Child Health Covid 19 Health Tips
ကိုဗစ်ကာလ မိခင်နို့ရည် ဘယ်လိုတိုက်ကျွေးမလဲ?
ဒီ Covid ကာလအတွင်းမှာ နို့တိုက်မိခင် သို့ မကြာခင်ကလေးမွေးဖွားတော့မယ့်နို့တိုက်မိခင်လောင်း တွေအနေနဲ့ မိမိကလေးငယ်ကို ဘယ်လို နို့တိုက်ကျွေးရမလဲဆိုပြီး ပူပန်နေမှာ သဘာဝပါပဲ။ကမ္ဘာအဝှမ်းမှာတော့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးဖို့ကို ထောက်ခံနေကြတာ မျက်မြင်ပဲဖြစ်မှာပါ၊
ဘာလို့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်တာလဲ..?
Aug 19, 2021 Hope
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီး ရင်ဆိုင်ကြရအောင်..ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်…1- ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးဆက်မှုကနေ ၁၀၀%မဟုတ်သော်လည်း ကာကွယ်ဆေးပေါ် မူတည်၍ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်..2- ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေ